Akụkọ - Ọnọdụ mmepe na usoro omume nke akụkụ ahịa nke ụlọ ọrụ ink
1. Isi na nhazi ọkwa nke ụlọ ọrụ ink
Ink bụ ihe na-eme mmiri mmiri nke nwere ihe na-acha uhie uhie na-agbasasị n'otu ihe ma nwee ụfọdụ viscosity. Ọ bụ ihe dị mkpa maka ibipụta akwụkwọ. N'ịkpọ oku taa maka mmepe nke akụ na ụba carbon na nkwado nke nchebe gburugburu ebe obibi na-acha akwụkwọ ndụ, mmepụta na ojiji nke ịchekwa ike na inks na-emetụ gburugburu ebe obibi na-arịwanye elu nkwenye nke ụlọ ọrụ ink na ụlọ ọrụ obibi akwụkwọ.
Ihe ejiri ihe ejiri mee ihe dị iche iche na ihe mgbaze. Ọ na-eji dị ka a ink ụgbọelu ịgbanwe viscosity, fluidity, nkụ na nyefe arụmọrụ nke ink, na-eme ka ink akọrọ, idozi na-etolite ihe nkiri n'elu nke mkpụrụ. Na ink ekpebi agba, tinting ike, chromaticity, mgbaze eguzogide, ìhè na-eguzogide, na okpomọkụ na-eguzogide nke ink. Inyeaka gị n'ụlọnga bụ obere ego nke inyeaka ihe agbakwunyere iji melite ink arụmọrụ ma gbanwee mbipụta mgbanwe nke ink n'oge ink n'ichepụta na-ebi akwụkwọ usoro. Enwere otutu inks dị iche iche, na inks dị iche iche dịgasị iche na arụmọrụ na arụmọrụ. Dị ka usoro mbipụta dị iche iche, ụdị ihe mgbaze na ụzọ ihicha, a ga-ekewa ya na edemede ndị a:
Nkewa site na mbipụta akwụkwọ: ink gravure, ink flexo, ink na-ebi akwụkwọ ihuenyo na ink jet, wdg;
Nkewa site na ụdị ihe mgbaze: ink ihe na-adabere na benzophenone, ink na-adabere na mmanụ, mmanya / ihe ọ solụ eụ ester, ink na mmiri na ink na-enweghị ihe mgbaze;
Nkewa site na ihicha usoro: obodo ihicha ink, oxidized conjunctival ihicha ink, thermal na-agwọ ihicha ink, ultraviolet n'ịgwọ (UV) ihicha ink na ndị ọzọ ihicha inks.
Ink ụlọ ọrụ a mụrụ mgbe mbụ ulo oru mgbanwe na n'ebe ọdịda anyanwụ mba na mepụtara ngwa ngwa n'ihi na mmepe nke chemical na nkwakọ ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ. Kemgbe 1980s, na mmepe nke akụ na ụba ụwa na ọganihu nke sayensị na teknụzụ, mmepụta nke ụlọ ọrụ ink nke ụwa na-aga n'ihu na-ebili, na ịchekwa ụlọ ọrụ amụbaala nke ukwuu. Companieslọ ọrụ ink 10 kachasị elu n'ụwa nwere ihe karịrị 70% nke oke ahịa ụwa. United States, China, Japan na Germany abụrụla ndị na-emepụta ink na ụwa na ndị na-azụ ahịa. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ink nke ụwa na-ebipụta kwa afọ bụ ihe dị ka nde tọn 4.2 na 4.5, nke nke ink nke mba m na-akọ maka ihe dịka 17% nke mmepụta ink zuru ụwa ọnụ. obodo m aburula onye na-eme ink nke abuo n’uwa.
2. Market nkewa na omume na-emekarị nke ụlọ ọrụ ink
Mpempe akwụkwọ nke ink kwa afọ na mba m toro site na tọn 697,000 na 2015 ruo 794,000 tọn na 2019, na nkezi uto kwa afọ nke ihe dịka 3.3%. N’ime afọ iri gara aga, agba na mgbanwe dị ukwuu nke ink nke mba m agbanweela ezigbo mgbanwe, mana isi na-ebi akwụkwọ nke mba m ka dị oke ala. Site na nzụlite na-aga n'ihu nke akụnụba mba m, mmepe mmepe nke ink na-apụtakwa ìhè. N'ọdịnihu, mmepe nke ụlọ ọrụ ink nke mba m ga - eme ka ọ bụghị naanị ịbawanye ngwaahịa, kama ọ ga - elebakwu anya na nghazi nghazi ngwaahịa, ọkachasị ịbawanye ntinye mmepụta, mụbaa nyocha na mmepe, melite ọdịnaya sayensị na teknụzụ, ogo ngwaahịa na nkwụsi ike ngwaahịa, ma mee ka ọ dịkwuo mma Today'slọ ọrụ obibi akwụkwọ nke oge a chọrọ multicolor, ọsọ ọsọ ọsọ, ihicha ngwa ngwa, enweghị mmetọ na obere oriri.
Site n'ọnọdụ nke ngwaahịa Ọdịdị, dị ka mkpa ọnụ ọgụgụ ndị dị otú ahụ dị ka ndị China Ink Association na radieshon uringgwọ Professional Committee of the China Photographic Society, na mmepụta nke dechapụ ebi akwụkwọ inks na mba m na 2018 gua banyere 36.0% nke ngụkọta ụlọ ink mmeputa. Mkpokọta mmepụta nke flexographic na gravure inks (mmiri mmiri inks bụ tumadi The ngwa ebe nke ụlọ ọrụ gụrụ banyere 42,8% nke ngụkọta anụ ụlọ mmepụta, na UV inks gua banyere 9,2% nke ngụkọta anụ ụlọ mmepụta.
(1) UV ink ahịa analysis
Ka ọ dị ugbu a, ngalaba ntinye akwụkwọ nke ink UV ụlọ bụ mbipụta nke sịga dị elu, mmanya, ngwaahịa nlekọta ahụike na ngwugwu ihe ịchọ mma, nke ihe karịrị ọkara; nke ọzọ bụ ibipụta akara ụghalaahịa dị iche iche, ego, wdg; ndị ọzọ bụ ụfọdụ ihe pụrụ iche ma ọ bụ ebumnuche pụrụ iche Ngwaahịa, dị ka kaadị magnetik, mpempe akwụkwọ plastik na ngwaahịa ndị ọzọ, na ụdị mpempe akwụkwọ plastik site na iji teknụzụ obibi UV na-emepe emepe mgbe niile.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, teknụzụ ọgwụgwọ UV na-eji nwayọọ nwayọọ pụta, a na-atụ anya na ọ ga-abụ teknụzụ na-agwọ ọrịa n'ọdịnihu. Igwe ọkụ ọkụ gwọchara ink ahụ, ogologo ntụgharị ogologo ya dị warara (nke dị ugbu a 365 ~ 395nm otu wavelength), ọkụ ọkụ nwere ogologo ndụ ọrụ, arụmọrụ ike dị elu, ike oriri ala, na ọkụ ọkụ nwere ike gbanye ma gbanyụọ ozugbo na-enweghị preheating , Igwe okpomọkụ ahụ dị oke ala, ọ dịghị ozone na-eme, ọ dịkwa nchebe, nwee mmekọrịta enyi na gburugburu ebe obibi na nchekwa ọkụ karịa nnukwu ọkụ ọkụ mercury nke eji eji ink nke UV eme ihe. Dị ka ụlọ ọrụ nyocha ahịa Yole si kwuo, ahịa ahịa UV nke ụwa na UV na-enye ìhè ọkụ ga-esi na 21% na 2015 ruo 52% na 2021, na UV-LED inks nwere atụmanya mmepe dị mma n'ọdịnihu.
Site na nhazi nke ngwaahịa, dabere na nchekwa nchekwa ọkụ na nchekwa gburugburu ebe obibi nke UV inks, npụta nke inks UV nke mba m (gụnyere mbipụta UV inks na solder mask UV inks, wdg) gụrụ maka mmụba zuru oke na nkezi nke ngụkọta ink nke ụlọ. 5,24% mụbara na 9,17% na 2018, uto ngwa ngwa, ma atụ anya na a ka ga-enwe ọtụtụ ụlọ maka uto n'ọdịnihu.